कठिन परिस्थिति विश्लेषण, हामी अक्सर अवचेतन बारी। धेरै उसलाई उपकरण कुरा। हामी Tarot कार्ड कुरा। तपाईं यसलाई बुझ्न यदि डेक, प्राचीन र शक्तिशाली छ। हामीलाई कार्डको मूल्य विचार गरौं तरवार को नाइट (Taro)। रूपमा पासोमा नपर्नुहोस् फरक परिस्थितिमा पङ्क्तिबद्ध असर गर्छ, यो कसरी पढ्न, बुझ्न, को आसन्न कार्ड संग कुराकानी। विज्ञान प्रमुख, तर यो कि मान्छे मा खर्च समय लायक छ। कुनै पनि कार्ड, बहुमुखी र अस्पष्ट छ छैन अरु देखि अलग छ, र तरवार को नाइट (Taro)। यस परिदृश्य मा यसको महत्त्व पुरानो रहस्यमय को प्रभाव पनि अधिरोहण गर्न सक्छ। तर यो सधैं हुँदैन। , आत्मा बुझ्न तिनीहरू भन्न-tarologi विशेषज्ञहरु गर्न, अध्ययन गर्न, जान्न प्राप्त गर्नुपर्छ हरेक फांसी दिन गूढ रहस्य को मूल कुराहरू सिक्न। त्यसपछि अनुमान यस्तो शक्तिशाली उपकरण प्रयोग गर्दा सोचेजस्तो, सही र मात्रा हुनेछ।
यो रहस्यमय कान्छो बुझाउँछ। तस्विरमा furiously dashing सवार (शास्त्रीय डेक)। नक्सा धेरै ऊर्जावान र द्वन्द्व छ। त्यो सुट, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष पूर्ण शक्ति अवशोषित। Arkan, को परिदृश्य मा, फेरि, झर्ने यो एक असामंजस्य, संघर्ष, शक्ति बनाउने, गर्भवती यसको अर्थ परिवर्तन। नाइट तरवार (Taro) ठिक को मामला मा वर्णन गरिएको छ। यो दबाव, साहस, साहस, धारिलो जिब्रो र धारिलो आँखा, अनुभव र सीप सँग सम्बन्धित छ। फांसी दिन एक व्यक्ति सङ्केत गर्छ भने, यो हो - धेरै संघर्ष पारित गरेको छ कि एक सैन्य, brute शक्ति प्रयोग को प्रसिद्धि र पहिचान जित्यो। उहाँले बिना कुनै हिचकिचाहट आदेश पालन गर्न प्रयोग भएको थियो। कुराहरूको समझ को एक सामान्य कमी मा हिड्ने - "कसरी गर्ने" र कमजोर ज्ञान आफ्नो शक्ति। उहाँले सम्झौता गर्न इच्छुक छैन, छैन दृश्य को अरू कसैको बिन्दु विचार गर्न इच्छुक छ, म त्यो सही छ पक्का छु। तरवार को नाइट (Taro) को मूल्य विचार गर्दा, यो यसको नकारात्मक पक्ष आवंटित गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले अवस्थामा उज्जवल देखा पर्न गर्छन। यी हिंसा, खराब प्रतिभा, संघर्ष पागलपन, अचानक, हतार निर्णय गर्न झुकाव समावेश गर्नुहोस्। त्यस्ता मानिसहरूलाई भन्नुहोस्। "को लहर मा" "बुद्धि देखि धिक्कार" वा तिनीहरूले कुनै पनि अवरोध, recklessness, साहस राम आफ्नो क्षमता लागि मूल्यवान छन्। इमानदारी र खुलापन अरूलाई उहाँलाई आकर्षित। तर तिनीहरूले ख्याति कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन। खराब बानी र कुराकानी गर्न नसक्नुको प्रशंसक तिनीहरूलाई धक्का। एक दुष्ट जिब्रो केही शत्रुहरू बनाउँछ। यो lasso सधैं एक व्यक्ति जनाउँछ छैन। केही शक्ती को पङ्क्तिबद्ध मा ल्याउन, तरवार को नाइट (Tarot), मान उनको परिवर्तन गर्दैन। उहाँले, इमानदार क्रोधित, मूर्ख र मूर्खता गर्न cocky, द्वन्द्वमा। तर संसारमा बहुमुखी र विविध छ। यस्तो ऊर्जा बिना उहाँले अपूर्ण भएको थियो।
नाइट तरवार (Taro): मान
उल्टा कार्ड अक्सर सन्तुलन ठीक हो जाए जो कोही नकारात्मक मूल्यांकन हुन्छ। निस्सन्देह, यो अवस्था संग अर्थ संगत गर्न, विशिष्ट अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईं निश्चित भन्ने एक फांसी दिन थियो भने, त्यसपछि, संसारको समस्या हल छैन भन्न सकिन्छ। स्थिति जो पारंपरिक हालतमा व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ तूफान, रोयौं। आफ्नो शक्ति यो अन्तरक्रिया गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका प्रभाव कमी छ भनेर ठूलो छ। अर्को शब्दमा, तपाईं sidelines मा खडा र प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। यसलाई कुनै पनि मामला मा तरवार को नाइट (Tarot) को मूल्य मात्र अस्थायी हो भनेर बुझे गर्नुपर्छ। ऊर्जा दीर्घकालीन प्रभाव सक्षम छैन। त्यो हावा आउँछ, सबै excites जस्तै छ र तल calms। मास्टर आफ्नै उद्देश्यका लागि यो स्न्याप्पर प्रयोग गर्न सक्षम छ। यो कसरी गर्न, तपाईं छिमेकी कार्डहरू हेर्न आवश्यक छ। पासोमा नपर्नुहोस्, आवश्यक विनाशकारी र बेकारी छैन ल्याउँछ जो आक्रमण। शायद यो समसामयिक। तर यो वास्तवमा को जागरूकता एक lasso को प्रभाव कारण पनि भावनात्मक dissonance नेगेट छैन। उहाँले दुखाइ वा विनाश, विश्वासघात वा त्रुटि मार्फत हुनेछ भनेर केही महत्त्वपूर्ण र आवश्यक परिवर्तन को संभावना वार्ता। एउटा कुरा अघि, कुनै थप हुनेछ, स्पष्ट हुन्छ। तपाईं हाम्रो lasso रोल भने, एक प्रमुख द्वन्द्व, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन त। तरवार को नाइट (Taro), वास्तवमा, आँधीको harbinger छ। यसको नतिजा अहिलेसम्म देखिने छ। यो तपाईं अनुमान व्यवहार कसरी निर्भर गर्दछ। सुझाव lasso गर्दैन। उहाँले, प्रतिमान खण्डन नयाँ र मौलिक समाधान खोज्न, काम गर्न टाउको गराउँछ। कि यसको उपस्थिति नियन्त्रण, पहिले मान्छे याद गर्नुभयो जो कि, जस्तै केहि को उद्भव बाहिर अवस्था को उत्पादन संकेत छ। तर यो तथ्य वा विचार पहिले नै आफ्नो हृदयमा परिपक्व छ। अब यो प्रकट गर्न समय।
सम्बन्ध मा प्रभाव
निजी हातमा कुनै पनि स्थितिमा हाम्रो lasso, खराब छ। यो सबै अन्य कार्डहरू अनुकूल छन् भने पनि, खातामा लिएको हुनुपर्छ। यो करीब परीक्षा मा एक प्रमुख बिन्दु यो तरवार को नाइट (Taro) बन्दछ सम्भव छ। "Egoism": सम्बन्ध मा मूल्य एक शब्द वर्णन गर्न सकिँदैन। यो यस अवस्थामा अरूको राय सुन्न गर्ने छैन एक मानिस संलग्न भन्ने हो। उहाँलाई लागि साझेदार चासो - खाली ठाउँ। उहाँले केवल देख्न वा तिनीहरूलाई बुझ्न, यस्तो अस्तित्व को बरु अनजान गर्नुभयो। यो अर्थमा दर्शन कि व्यक्तित्व मा। यो हामी सहमत गर्न सक्दैन, तर यो तर्क गर्न बेकारी छ। अनुभवी विज्ञहरू प्राकृतिक घटना एक व्यक्ति द्वारा कथित सिफारिस गर्छौँ। परिषद मात्र होइन व्यक्तिगत सम्बन्ध मा त्यो व्यक्ति आउन गर्छ गर्नेहरूलाई उपयोगी छ। आफ्नो साझेदार हाम्रो lasso द्वारा विशेषता छ भने, यो विचारशील छ। यो व्यक्ति सकारात्मक पक्ष छ। उहाँले सक्रिय ऊर्जावान, वफादार र विश्वास छ, सफा र खुला छ। अर्कोतर्फ, यो विश्वस्त गर्न असम्भव छ। उहाँले मात्र के उहाँले सोच्छ आवश्यक र सही छ गर्नेछ। Halftones, यो व्यक्ति लचीलापन अयोग्य घृणित गुणस्तर ठान्नुहुन्छ, बुझ्ने गर्दैन। यो कि तरवार को नाइट (Taro) को रूप मा, ब्यालेन्स मा पतन पुरुष हो। को lasso को सम्बन्ध मा महत्व यसको स्थिति ध्यान, deciphered गर्नुपर्छ। कार्ड साझेदार छेउमा पतन भने, त्यसैले त्यो उहाँका गुणहरू र मनसाय बारेमा बताउँछ। आफ्नो मा - स्थिति तपाईंको प्रतिक्रिया केलाउनुहोस्। शायद, यो त्यहाँ यथास्थिति तोड्न गर्ने इच्छा छ भन्ने त distasteful छ। हाम्रो नाइट भविष्यमा हुँदा, यो द्वन्द्व लागि तयारी गर्न आवश्यक छ। हालसम्म हामीले मात्र धर्मी lasso बारेमा कुरा गरेका छन्।
सम्बन्ध (एक उल्टो नक्सा) मा प्रभाव
विशेषज्ञहरु ग्राहकको भाग्ने मार्गहरू लागि देख, यस्तो अवस्थामा मा फांसी दिन देखे, unscathed स्थिति बाहिर तरिका। को उल्टो व्यवहारमा तरवार को नाइट धेरै नकारात्मक छ रूपमा यो, अर्थमा बनाउँछ। स्वाभाविक, यो कसैको क्षेत्रमा वर्तमान छ, हेर्न गर्नुपर्छ। फारम मा उल्टो कट्टर अक्सर विश्वासघात बताइएको भन्ने तथ्यलाई। कार्ड को स्थिति को बिना यो एक पाकेको अवस्था हो। त्यो छ, एक सम्बन्धमा पहिले नै गम्भीर द्वन्द्व अवस्थित छ। यसलाई के फरक छैन, मान्छे यसलाई महसुस वा अझै छैन। धारणा मतभेद एक साधारण डिनोमिनेटर तिनीहरूलाई ल्याउन भनेर ठूलो लगभग असम्भव छ। ठीक क्रोध र अनुहार, भविष्यमा तनाव र असहमति सिर्जना को क्षेत्रहरू ऊर्जा, तरवार को precipitated परिदृश्य नाइट (Taro) भने। व्यक्तिगत सम्बन्ध लागि मान छैन आंका गर्न सकिन्छ। उनि लगभग विफलता गर्न बर्बाद छन्। तर, फेरि, कार्ड को स्थितिमा हेर्न। यो विगतमा छ, र यो रहस्यमय अनुकूल पछि छ भने, त्यसपछि भूल केहि को सतह बाहिर पौडी खेल्न। को भागीदार एक गल्ती र यसलाई लुकाउन सक्षम थियो एक पटक। अब, दोस्रो त्रुटि ज्ञात हुन्छ। तरवार को नाइट "वास्तविक" स्थिति, पूर्ण स्विंग मा द्वन्द्वमा खडा गर्दा। यो आन्तरिक विरोधाभास बुझाउँछ। तिनीहरूले आवश्यक भ्रष्टाचार र quarrels देखा छैन। को बस एक जोडी यसको अनुरूप गुमाए। मान्छे पहिले नै तिनीहरूले सँगै पट्टाइ लाग्ला, विभिन्न दिशामा हेर्न। भविष्यमा, हाम्रो lasso एक भयानक घोटाले ग्यारेन्टी। शायद, मतलब धोखा disclosed गरिनेछ। को साझेदार यसको एक कारण नयाँ उच्च भावनाहरू को उद्भव को, र स्वार्थ को छैन। बस आफूलाई ठोकुवा गर्न चाहन्छु। र खाली यति, उदास कसरी मूर्ख र लापरवाह हुनेछ। सबै सचेत मा नकारात्मक lasso।
संचालन अन्तरक्रिया पक्ष नाइट तरवार (Taro) मूल्य
स्थिति हाम्रो रहस्यमय प्रभाव त खराब छैन। अक्सर, उहाँले सम्बन्ध बढन सक्छ कि भित्र भइरहेको छ के को अर्थ वोल्ट नट आदि खोल्नु एक व्यक्ति को घटना संलग्न भविष्यवाणी गर्छ। यो धेरै राम्रो, तर यो सुनिन्छ रूपमा नकारात्मक छैन छैन। एक अर्थमा यो व्यक्तिगत प्रभाव, बिस्तारै, यदि प्रक्रिया सबै अन्य सहभागीहरू राम्ररी यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्षम हुनेछ। नाइट ताजा विचार र दृष्टिकोण ल्याउँछ। उनीहरूले आवश्यक विकास गर्न नेतृत्व छैन भनेर बुझ्न, तर कुनै एक आशङ्का जो एक अज्ञात हात, साथ प्रक्रिया उजाला छ। यो बदमास व्यक्तित्व मात्र नकारात्मक पक्ष - द्वन्द्व। मानिस आफूलाई सबै बीच quarreled र पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्न जब, यो एक धेरै बाहिर जान्छ। स्थिति त्यहाँ बुद्धि छ भने, सुन अनाज त एक विशाल बाली दिनेछु जो परिस्थिति देखि चयन गरिएका छन्। तपाईंलाई थाहा, सबै चलाउनु उतेजित गर्नु, निर्देशन गर्न हलचल - तरवार एक नाइट (Taro) को रूपमा पतन गर्ने व्यक्ति को कार्य हो। को arcana को अर्थ र व्याख्या संलग्न अन्य व्यक्ति निर्भर छ। नाइट तिनीहरूलाई मौका, जो कोहीले यसलाई कसरी लागू गर्न सक्छन् बारेमा सोच बिना दिन्छ। एकै समयमा उहाँले विचार को उचित मा भित्री विश्वस्तता देखि कार्य। कि फांसी दिन एक निश्चित व्यक्तित्व छ भने पनि, छ, ध्यान यसलाई बरु कार्यहरू भन्दा, शुरू, ऊर्जा हुनुपर्छ। त्यसपछि डिक्रिप्सन गहिरो, स्पष्ट र थप सही हुनेछ।
एक उल्टो कार्ड को स्थिति मा प्रभाव
यहाँ lasso आशावाद दिन छैन। यसलाई अन्य कार्ड संग संयोजन मा तरवार को Tarot कार्ड नाइट मान विचार गर्न आवश्यक छ। को उल्टो नक्शा विशिष्ट विश्वासघात भविष्यवाणी भन्ने तथ्यलाई। कसैले अनुमान विरुद्ध कार्य। उहाँले सक्रिय बौद्धिक र धूर्त छ। र हाम्रो नाइट (पहिचान तिनीहरूलाई केही) शत्रुको आँखा बंद, आफ्नै उद्देश्यका खुलासा बिना प्रयोग। त्यो हो, ब्यालेन्स मा foe पर्दैन, तर यसको सञ्चालन देखि हानि। स्थिति हेर्दा, यो हानि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ, र तिनीहरूले आवश्यक हुनेछ। नजिकैको कार्ड शीघ्र तिनीहरूले कम से कम, तर रोक्न सकिएला रूपमा। पासोमा नपर्नुहोस् को "भविष्यमा" राज्य थियो भने, यो आरोप योजना को समयमा दिन सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले सफल छैन। मौका को विन्डो हराइरहेको को स्थिति विचार गर्दा यदि ब्यालेन्स सम्बन्ध मा तरवार को कार्ड Tarot नाइट मान व्यक्तिगत शक्ति वा बुद्धिले निष्प्रभावी गर्न सकिन्छ, घटना देख अनुमान गर्न माथिबाट। यो जम्मा सेना को नकारात्मक अवधि बाहिर सवारी शत्रु अध्ययन आवश्यक छ। किनभने पङ्क्तिबद्ध व्यक्ति देखाउन छैन, Gada injuring। यसलाई अझै neutralize गर्न कार्य को एक योजना विचार, गणना गर्न भएको छ। एक उल्टो lasso को उपस्थिति छैन उपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसको विपरीत, यो ठीक यो प्रतिक्रिया भने, ठूलो समस्या बच्न मौका दिन्छ। यो संघर्ष मा आएको भइरहेको बिना बुझ्न सजिलो हुनु पर्छ। र तिनीहरूलाई प्रकुपित गर्ने एक दया। त्यो व्यक्ति अनजानमै शायद आफ्नो, शत्रु को हात मा एक उपकरण भयो।
स्वास्थ्य परिदृश्य मा प्रभाव
यस मामला मा, तपाईं तरवार को नाइट ल्याउँछ कि ऊर्जा खातामा लिनुपर्छ (Taro) मूल्य (स्वास्थ्य मुद्दा को केन्द्र हो) यसको शक्तिशाली र अथाह लहर निर्धारण गरिन्छ। यो रोग को विकास गर्न आउँदा यसलाई तुरून्त एक डाक्टर खोज्न आवश्यक छ। यो रोग तीव्र गतिमा प्रगति। स्वास्थ्य को ठूलो तस्वीर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, जीवन शैली मा एक गम्भीर परिवर्तन सोच्न। नाइट थप सक्रिय हुन खेलकुद, व्यायाम, धक्का। तपाईं शायद एरोविक्स वा जिम जाँदै लागि साइन अप गर्नु पर्छ। उल्टा lasso अचानक प्रकोप द्वारा धम्की। प्राय छैन भन्दा तिनीहरूले hooligans नकारात्मक परिणाम संग आक्रमण दुर्घटना, विषाक्तता, सम्बन्धित छन्। प्रमुख शब्दहरू यहाँ: rudeness, संघर्ष खतरा, आश्चर्य। यदि कार्ड "बोर्ड" स्थिति, तीन ध्यान मा पर्छ। एक अयोग्य व्यक्तित्व, आफ्नो शरीर भोग्नेछन् जो मूर्खता देखि हुन त्यहाँ सक्छ। सायद तिनीहरूले परिवारका सदस्यहरूको एक हुनेछ। यस परिदृश्य मा एक उल्टो कट्टर को उपस्थिति पछि यति मा झगडा र सम्भव बाढी, आगो, घाइते, बल्न छन्। यसलाई बुझ्ने गरिन्छ: कार्ड घातक रोगहरु कुरा छैन, र यस्ता खतराबारे। तरवार तीन संग अन्य संसारमा गर्न संक्रमण भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो वरपरका arcana नियालेर लायक छ।
सम्भावना उच्चतम डिग्री संग हामी हाम्रो रहस्यमय मुख्य या उसलाई प्रभावित गर्ने व्यक्ति प्रतिनिधित्व भनेर भन्न सकिन्छ। यो स्वार्थी छ जो कोहीले भन्दा कदम गर्न सक्षम। यो केवल आफ्नै हितमा रुचि छ। अक्सर आसपास तरवार को नाइट (Taro) को प्रतीक जसले एक को कार्यहरू ग्रस्त। मूल्य - यो व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन, पुन: मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छैन - काम पङ्क्तिबद्ध को केन्द्र हो। तपाईं टोली संयोजन भने सजिलो संग, एक हावी ह्यान्डल गर्न। व्यक्तित्व lasso नामित कसरी, सम्बन्ध निर्माण गर्न मान्छे संग प्राप्त थाहा छैन। तिनीहरूले शत्रुलाई बनाउन सजिलो, तर मित्र छैन। यसलाई आफ्नो मालिक हो भने उसलाई त्यसपछि चापलूसी। यो कुनै न कुनै र पृथ्वी व्यक्ति तल। उहाँले कुनै subtlety थाह छ। हामी कार्य गर्न आवश्यक छ। यो फांसी दिन ऊर्जा संकेत गर्दा बुझ्न गाह्रो छ। कसैले गोप्य, तर विनाशकारी कार्य। यो शत्रु गणना र neutralize गर्न आवश्यक छ। सामान्य मामलामा, कार्ड गर्दा सीधा स्थिति पतन, व्यापार को विकास को लागि अनुकूल छ। त्यो नेटवर्क को विस्तार, कब्जा बजार, विकास र यति मा वार्ता। तर यो अधिकारीहरु संग संघर्ष को संभावना मा संकेत। बस घूस दिन भने हामी गर्नुपर्छ।
एक क्यारियर लागि परिदृश्य मा उल्टा कट्टर
स्थिति को अध्ययन मा, यहाँ यो योजना नत्याग्ने सिफारिस गरिएको छ। को lasso कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। उहाँले यो संग हानि र विनाश ल्याउँछ। यो कहिलेकाहीं प्रमुख Arcana "द टावर" को नकारात्मक प्रभाव तुलना गरिएको छ। गाद मा कुनै ऊर्जा थप गर्न। उहाँले पहिले मेहनत जित्यो थियो कि स्थितिमा रहन थियो। र कार्ड को मूल्य तरवार को Tarot नाइट यदि सम्भव छ भने यो छोटो समयको लागि रिटायर गर्न सिफारिस गरिएको छ भनेर हार्ड उल्टो छ। यो Pentacles को पांच संयोजनमा पतन भने, पैसा वा स्थान गुमाउन। त्यहाँ उपस्थित हुँदा ", फाँसी" सबै परियोजनाहरू बन्द गर्न जरुरी आवश्यकता। कसैले अनुमान विरुद्ध प्रभावशाली प्रेरित। आफ्नो प्रभाव प्रतिरोध छैन सम्भव यस समयमा, यो पूर्ण पतन र सायद incarceration नेतृत्व गर्नेछ, त्यसैले ठूलो र मात्रा छ। स्थिति यो शत्रु को बाटो बाट हटाउने, चाँडै प्रतिक्रिया गर्न आवश्यक छ, धेरै गम्भीर छ। र अवस्था भावनात्मक स्वीकार छैन। शायद तपाईं नयाँ ट्रयाक सामाजिक विकास राखे जसमा ठाउँमा हुनु हुनेछ। कि, घटनाको कुनै व्यक्तिगत आक्रमण हो, यो भयो।
व्यावहारिक पक्ष हाम्रो कट्टर हेर। सबै कार्डहरू को दार्शनिक पक्ष रुचि छन्। मा तरवार को नाइट (Taro) पतन कि दिन शेष कसरी decipher गर्न? प्रेमको मूल्य धेरै variably र अस्पष्ट छ। यी पक्षहरू पनि अल्पकालीन पूर्वानुमान विचार गर्नुपर्छ। सायद, झर्ने दिन कार्ड मा ब्यालेन्स मा पछि जो यी दिनमा आगे गर्न आउँछन् नापसंद, टाढा सार्न सिफारिस गरिएको। तपाईं सुन्न हुनेछ भने, त्यसपछि तपाईं असामंजस्य बाहिर बाट व्यक्तिगत सम्बन्ध मा ल्याउन। त्यो Arkan एक अप्रिय व्यक्ति, को योजना गर्न विरोध, contingencies नकारात्मक अर्थमा सामना गरिनेछ भनेर भन्छन् छ। यो रीस उठाउनु र प्रकुपित हुनेछ। यो घटना philosophically भइरहेको तिनीहरूलाई संलग्न बिना, पृथक विचार गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले एउटा पाठ रूपमा आउँछन्। त्यसैले तिनीहरू लाग्छ। आक्रमण को हुक मा पकडे त्यसैकारण, पाठ असफल भयो। यसरी नकारात्मक घटनाहरू एक श्रृंखला को तान्नुहोस्। चासो द्वन्द्व बारेमा कार्ड बताउँछ। यो अवस्थामा आफ्नो भूमिका - को Fray माथि उठन गर्न सहभागीहरू विश्लेषण र आफ्नो मनसाय कसरी सिक्न। फांसी दिन तलमाथि गरिएका भने, जो विश्वास गर्नेहरू भाग मा एक प्रत्यक्ष हडताल लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यसको अर्थ - विश्वासघात। टिप: आफ्नै अवस्था, चासो, मनसाय को गहन विश्लेषण। शायद, यो देशद्रोही आफ्नो जीवनमा यसको सकारात्मक प्रभाव गुमाएको छ। उहाँलाई कुराकानी गर्न इन्कार गर्न स्वतन्त्र महसुस।
गूढ रहस्य तरवार को नाइट संग decomposed, विभिन्न तरिकामा आफ्नो भूमिका देखो गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। घटनाहरू परिवर्तन, कठिन कहिलेकाहीं असम्भव छ, र आफ्नो परिणाम को प्रयोग मात्र विकसित र बुद्धिमानी व्यक्ति बाट प्राप्त छन्। यो मन यो राख्न सिफारिस गरिएको छ र उदास प्राप्त छैन यस पङ्क्तिबद्ध स्थिति नकारात्मक विकास भविष्यवाणी गर्दा। एक पटक यो हुन्छ, यो यस विशेष समयमा लागि आवश्यक छ भन्ने हो। त्यसैले, किन अनुरूप र आनन्द को दिशा मा सबै बारी, भावना असक्षम दिमाग प्रयोग? जीवन कार्ड, तर एक व्यक्ति निर्माण गर्दैन। Tarot डेक - विकास को लागि संभावना प्रशस्त दिन्छ कि एक उपकरण! शुभकामना छ!
चलचित्र को शैली मा विषय पार्टी: वेशभूषा, लिपि
उपकरण प्रविधि, ताप र समीक्षा: आफ्नो हातले तरकारी को जाडो खेती को लागि एक ग्रीनहाउस कसरी निर्माण गर्न